भरिएका अण्डाहरू - थर्मोमिक्स रेसिपीहरू ThermoRecines
सुरूवात22 मिनेट4 व्यक्ति
यो मेरो श्रीमान्को मनपर्ने खाना हो र म यो मौसममा गर्दछु। राम्रो मौसम। यद्यपि यो सत्य हो, कि लगभग गर्मी बितिसकेको थियो र मैले यो नुस्खा तयार पारेको छैन।
केही सप्ताहन्त पहिले मेरा आमा बुबा खान को लागी आउनुभयो र मैले दोस्रो कोर्स को बारे मा सोचेको थिए, तर यो ती दिनहरु को लागी हो कि तपाइँ केहि "मोटी" हुनुहुन्छ र म कुनै को बारे मा सोच्न सक्दिन सरल र धनी पकवान एकै पटकमा। मैले मेरी जेठी छोरी संग टिप्पणी गरे कि मलाई थाहा छैन कि के खाने के गर्ने र उनले छिटो भन्यो: "आमा, अण्डा !! ..." उनी यो डिश को सन्दर्भ गर्दैनन्, तर भुटेको अण्डा को लागी, जो उनको पागल ड्राइभ, तर उनले मलाई यो एक को नुस्खा दिईयो अण्डा यो समय"।
यी अण्डाहरू छोटो समयमा तयार गरिन्छन् र यस डिशको बारेमा राम्रो कुरा हामी यो गर्न सक्छौं यो अग्रिम तयार गर्नुहोस्। उनीहरु ती व्यञ्जनहरु मध्ये एक हो कि हामीलाई एक यात्रा संग समस्या बाट बाहिर निकाल्न को लागी हो, किनकि तपाइँ उनीहरु लाई बिहान को पहिलो चीज बनाउनु भएको छ र जब भ्रमण आउँछ तपाइँसँग सबै चीज तयार छ, हामी मात्र फ्रिज र सीधा टेबलमा जानु पर्छ।
टोकरीमा अण्डाहरू पकाउँदा, म सिरकाको फ्याँकी थप्दछु, किनकि यो ए हो चाल ताकि खाना पकाउँदा अण्डा नहोस्।
र यदि तपाइँलाई अधिक चाहिन्छ विचारहरु तपाइँलाई प्रेरित गर्न को लागी यहाँ तपाइँसँग एक छ धेरै फरक विचारहरु संग संकलन।
1 भरिएको अण्डा
अण्डाका साथ स्वादिष्ट नुस्खा जुन हामी अग्रिम बनाउन सक्छौं।
खाना पकाउने समय: 22M
कुल समय: 22M
सिरका को एक स्प्लैश
टुनाको २ साना क्यानहरू
१ जैतूनको सानो साना डिब्बा (मैले तिनीहरूलाई हरियो पिट राखें)
घंटा मिर्चको १ सानो साना डिब्बा (हामी सजाउन साना स्ट्रिपहरू बनाउँछौं)
मेयोनेज4चम्मच
julienned काटिएको सलाद सजाउन को लागी (तयारी हेर्नुहोस्) यहाँ)
हामी अण्डाहरूलाई टोकरीमा राख्छौं र रिजर्भ गर्दछौं।
हामीले पानीलाई थर्मामिक्सको गिलासमा राख्यौं र टोकरी भित्र राख्यौं। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
समय पछि, हामी spatula को सहयोग संग टोकरी हटाउन र चिसो पानी मा अण्डा ठुलो।
सफा गिलासको साथ, हामी काट्छौं यो चाल पछ्याएर सलाद।
हामी अण्डा छीन्छौं र तिनीहरूलाई आधा लम्बाईमा काट्छौं। हामी जर्दीलाई अलग गर्छौं, उनीहरुलाई सफा र सुक्खा गिलास मा हाल्छौं र उनिहरुलाई भट्की दिन्छौं Seconds सेकेन्ड, गति 2.
हामी गिलास बाट ग्रेटेड जर्दी को चम्मच को एक जोडा पछि सजाउन र आरक्षित गर्न को लागी।
काँसामा कल्ट गरीएको पीसी, टुना र मेयोनेज थप्नुहोस्। हामी प्रोग्राम Seconds सेकेन्ड, गति 3। हामी यो मिश्रणले अण्डाहरूको प्रत्येक भाग भर्छौं।
हामीले सुक्खा र ड्राई सलाद राख्नका लागि एक स्रोतमा सजाय गर्नका लागि राख्छौं र हामी प्रत्येक अण्डा वरिपरि भरिन्छौं। शीर्षमा दुई-ठूला चम्मच पिसेको पीसी छर्क्नुहोस् र घण्टी मिर्चको पट्टीले घेरिएको प्रत्येक अण्डको माथि जैतुन राख्नुहोस्, मानौं यो स्कार्फ हो, र यसैले हामीसँग उत्कृष्ट थाल छ।
तिनीहरूले धेरै राम्रो लिनु पर्छ। यदि हामीसँग बाँचेको फिली .्ग छ भने, हामी यसलाई क्यानपाजको रूपमा टोस्टेड रोटीमा लिन सक्छौं।
थप जानकारी - गर्मीमा रमाउन dev शैतानका अन्डा रेसिपीहरू
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: एपेटाइजरहरू, Celiac, सजिलो, Huevos, ल्याक्टोज असहिष्णु, १/२ घण्टा भन्दा कम, गर्मी रेसिपी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » एपेटाइजरहरू » भरिएको अण्डा
तिनीहरू स्वादिष्ट अण्डाहरू हुन्। मेरी आमाले तिनीहरूलाई सँधै घरमा बनाउनुभएको छ, र अब मैले तिनीहरूलाई मेरो बनाएको छु। तिनीहरू एक क्षणमा बनाइन्छन् र उनीहरू सबैलाई मन पराउँछन्। थपको रूपमा, ती धेरै भिन्नताहरू अनुमति दिन्छन्, दुवै भर्ने र सजावटमा।
तपाईंले आजका लागि धेरै राम्रो विधि छनौट गर्नुभयो
तिनीहरू कति धनी छन्! घरमा तिनीहरू ग्रीष्म laतुमा अभाव पाउँदैनन् किनकि उनीहरूको तयारी दिनको बढि फैलिन्छ।
सबै कुरा कल्पनामा हुन्छ, राम्रोसँग वा सबै कुरा…। त्यहाँ तपाईको सीप पनि छ
तपाईले देख्नुभयो, केहि भरिएको अण्डा जुन मैले तिनीहरूलाई बनाएको छु र ती थालमा हुकमा टाँसिरहन्छन्, एक अर्कासँग ठोक्किन्छन्, आधा टेढो ... तिनीहरूलाई हेर्नुहोस्…।
उनीहरू राम्रा देखिन्छन् र उनीहरू राम्ररी प्रस्तुत छन्, यो मेरी आमाले बनाउने भाँसाहरूमध्ये एक हो।
के !! यो राम्रो देखिन्छ र कस्तो सुन्दर प्रिस्टेन्सिअन हसी तपाईं लिन चाहनुहुन्छ, धन्यवाद, यसले हामीलाई धेरै मद्दत गर्दछ, चुम्बन
कतिवटा रेसिपीहरू सम्झनु कत्ति राम्रो छ, मेरी छोरी पनि उनको मनपर्नेहरू मध्ये एक हो, जबकि फ्राइड हभोसले उनलाई पागल गर्दछ र म नुस्खा राख्छु, धन्यवाद
धेरै राम्रो, तिनीहरूसँग पिन्ट पनि छ…। म मेयोनेजको साथ एक सानो फ्राइड टमाटर पनि राख्छु र ती धेरै स्वादिलो ​​हुन्छन्।
मैले तिनीहरूलाई लामो समयदेखि खाइनँ, मेरी आमाले यो धेरै गर्नुहुन्थ्यो।
यो सप्ताहन्त म गर्छु।
सत्य यो हो कि यसमा पिन्ट छ, धेरै पटक यो दृश्यले खान्छ। सबैलाई बधाई छ।
मेरी आमाले तिनीहरूलाई सँधै घरमा बनाउनुहुन्थ्यो, कहिलेकाहीँ क्रिसमसमा ... यो धेरै आश्चर्यजनक थियो र सबै बच्चाहरूले तिनीहरूलाई माया गर्थे। अब म तिनीहरूलाई गर्छु र पक्कै पनि तिनीहरू राम्रा छन्। यो सजावट प्रयोग गर्नुहोस्: तीन वा चार yolks बचत गर्नुहोस् (यदि तपाईं प्यास्ट्रीहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ वा थर्मसको साथ ग्रेट गरिएको छैन भने पूर्ण रूपमा)। एउटा राम्रो डिशमा मेयोनेजको पातलो लेयर राख्नुहोस् (म यसलाई बनाउँदछ किनकि हामी यो घरधनीलाई मनपराउँछौं) यसमा भरिएका अण्डा, तर तस्विरमा नहेर्ने र टुथपिकमा हामी एन्कोभी, रातो मिर्चको एक पट्टी कुँदे ( मैले एउटा क्रस बनाएको छु र एउटा जैतुन (यदि यो राम्रोसँग एन्कोभीले भरिएको छ भने) र हामी त्यसलाई अण्डाको चुचुरामा भद्राक्षको माथिबाट जैतून छोड्दैछौं। एकपटक सबै सकिएपछि, हामी सबै अण्डाहरूमा बोक्रा छिचोल्दछौं (फूड मिलसँग मैले राम्रोसँग प्रबन्ध गर्ने गर्छु: म यसबाट जर्दी पार गर्दछु जुन अण्डाहरूमा वितरण गर्दछु, यस्तो देखिन्छ जस्तो कि यो वर्षा भएको छ)
चुम्बनहरू, तपाईंले मलाई भन्नुहुनेछ।
सत्य यो हो कि तिनीहरू स्वादिष्ट छन् र सबैजनाले तिनीहरूलाई मन पराउँछन्!
उम्म्म्म स्वादिष्ट !!!!!
यस डिशले तपाईंलाई कुनै पनि क्षणमा समस्याबाट निकाल्नेछ, महान hehe हुनु बाहेक सबैलाई मनपर्दछ ... कति राम्रो ...
प्लेटको सजावट धेरै आकर्षक र आकर्षक छ।
धन्यवाद, चुम्बन !!!
मैले शनिबार राति तिनीहरूलाई बनाएँ, मैले साथीहरूसँग खाजा खाएँ र त्यहाँ एउटै पनि बाँकी थिएन ... तिनीहरू स्वादिष्ट छन् !!!! अभिवादन
चमत्कार वीर कार भन्यो
म चाहन्छु कि उनीहरूले पुस्तक पठाए। म तौल घटाउन सक्दिन।
अग्रिममा धेरै धेरै धन्यवाद
चमत्कार गैलन कार को लागी जवाफ दिनुहोस्